Astaamaha Iran-al-Qaacida’: xarun ka dhiganeysa mar labaad | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Astaamaha Iran-al-Qaacida’: xarun ka dhiganeysa mar labaad
Labaatan sano ka dib markii uu ku duulay Ciraaq xiriir la sheegay inuu la leeyahay al-Qaacida, Mareykanku wuxuu hadda sheegay in Iiraan ay tahay ‘guriga cusub’ ee kooxda hubeysan.
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo oo ka hadlaya Naadiga Saxaafada Qaranka ee Washington, DC, Ja
Bishii Sebtember 2002, Madaxweynaha Mareykanka George W Bush wuxuu khudbad ka bilaabay magaalada Nashville isagoo si qurux badan uhadlaya: “Waxaa jira oraah hore oo ka jirtay Tennessee – Waan ogahay inay tahay Texas, laga yaabee inay tahay Tennessee – oo dhahaysa, hal mar nacas, xishood – xishood dushaada Nacas ii – mar dambe ma lagu siri karaa “.
Tani waxay ahayd lix bilood ka hor bilowgii dagaalkii Ciraaq ee dhammaan gumaadkeedii, taas oo Mareykanku isku dayay inuu adduunka ku khiyaaneeyo inuu u maleeyo inuu xaq u lahaa Saddam Hussein oo lagu eedeeyay hub baabi’in ballaaran iyo inuu xiriir la leeyahay al-Qaacida. Xaqiiqdii, ma jirin wax hub ah, oo al-Qaacida waxay u timid oo keliya inay ku kobocdo Ciraaq natiijada ka dhalatay – maxaa kale? – Mareykanka
Pompeo wuxuu leeyahay ‘saldhigga cusub ee al-Qaacida’ waa Iran, iyada oo aan wax caddeyn ah loo hayn
Si dhakhso leh u soco ku dhowaad labaatan sano, maamulka hadda jira ee Mareykankuna wuxuu umuuqdaa mid ka go’an inuu ka takhaluso hadalkii Bush ee ahaa “inaadan mar dambe siriin karin”.
Hadda, dabcan, bartilmaameedku waa Iiraan – laakiin dooddu waa isku mid.
In kasta oo aan horeyba u soo dhaafnay afartii sano ee la soo dhaafay Donald Trump madaxweynenimadiisii ​​maqalka himilooyinka niyukliyerka ee Iran, Trump & Co waxay leeyihiin, ka hor maalinta ay ka baxayaan xukunka, waxay go’aansadeen inay na siiyaan hadiyaddii ugu dambaysay – taas oo ay shaki la’aan rajeynayaan inay si dhakhso leh u dhaqso u samayn doonto. wasakhaynaysa maskaxda bulshada oo markaa isu rogeysa xaqiiqo la aqbalay.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee waqtigiisu dhammaaday, Mike Pompeo ayaa khudbaddii ugu dambeysay ku soo bandhigay khudbad uu Salaasadii ka jeediyey Naadiga Saxaafadda Qaranka ee Washington, DC: “Al-Qaacida waxay leedahay saldhig cusub oo hoy ah. Waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ”.
Weligaa ha moogaan in al-Qaacida iyo Iiraan ay yihiin, waad ogtahay, inay yihiin cadaw dhiman. Runtu kuma xirna arrimaha amniga qaranka.
Xaqiiqdii, Pompeo wuxuu cadeeyay, al-Qaacida inay heshay xitaa “meel amaan ah” marka loo eego Afgaanistaan: “Si ka duwan Afgaanistaan, markii Al Qaacida ay ku dhuumaaleysaneysay buuraha, Al Qaacida maanta waxay ka hoos shaqeyneysaa qolofka adag ee ilaalada taliska Iran”.
Waad ku mahadsan tahay heshiiska, ayuu ku andacooday, al-Qaacida waxay hadda heshaa lacag badan iyo “qalab cusub oo loogu talagalay argagixisada”, waxayna awood u leeyihiin inay cagahooda dib ugu ceshadaan Tehran ayna qorsheeyaan weeraro caalami ah. Iiraan “waxay u oggoshahay Al Qaacida inay si xor ah ula xiriiraan kuwa neceb naceybka dibada”.
Caadi ahaan, Pompeo ma uusan soo bandhigin wax cadeyn ah oo lagu taageerayo aragtidiisa weyn – laakiin taasi kama hor istaagin Xoghayaha Arimaha Dibada inuu ugu baaqo “wadan kasta inuu aqoonsado in heshiiskan xaaraanta ah uu si weyn u kordhinayo halista weerarada argagixiso ee ka dhanka ah dadkooda”.
Qof kasta oo ka maqnaada hadalkii hore ee Axis ee Xumaanta ayaa dhanka kale qalbi jab ku noqon doona maqalka in hadda si rasmi ah u jiro “Axis Iran-al-Qaacida” oo ah “xoog weyn oo shar u leh adduunka oo dhan”
Arrinta sida gaarka ah u danaynaysa Pompeo ayaa ah in qodobkan “uu khatar ku yahay horumarka” ee heshiisyada nabadeed ee Israa’iil ay si bareer ah ula saxeexanayso waddamada carabta ee danaystayaasha ah, iyo in Al-Qaacida ay u adeegsan karto weerarro argaggixiso oo heer gobol ah si ay “madow” ugu geyso quruumaha hadhay si ay uga fogaadaan inay ku boodaan bandwagon.
Israa’iil, dhinaceeda, waxay xor u tahay inay sii wado argagaxa ay ku hayso Falastiiniyiinta iyo dadka kale ee gobolka deggan, iyadoon khatar ugu jirin inay iska hesho “dhidib” kasta.
Si uu u soo gunaanado khudbadiisa, Pompeo wuxuu safar yar ku galay wadada xusuusta – dib ugu noqo 1983, markii uu ku jiray sanadkiisii ​​labaad ee Akadeemiyada Milatariga Mareykanka ee West Point, wuxuuna soo qaatay wargeyska maalin maalmaha ka mid ah si uu u akhriyo in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu oo lagu xanaaneeyo xerada ciidamada badda ee Mareykanka ee Beirut, halkaas oo ay ku dhinteen 241 “dagaalyahanno Mareykan ah”.
Isagoo sharaxaya in noloshiisa “aysan ahaan doonin wixii intaas ka dambeeyay”, Pompeo wuxuu sii waday inuu xasuusiyo dhagaystayaashiisa in argagixisada xeryaha Mariniga ay qayb ka ahaayeen “hore u soo ifbaxay Xisbullah”.
Iyo qoriga qiiqaya, oo loo soo gudbiyay si iskiis u qanacsan: “Waxay haysatay taageerada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran”.
Miyay taariikh iyo macno ahaan loo arkaa inay yihiin wax la soo dejiyay – halkii laga hor istaagi lahaa faafinta dacaayadaha – Pompeo waxaa laga yaabaa inuu dib u xasuusto in Hezbollah lafteeda ay tahay natiijo aan cid kale aheyn oo ah duulaankii Israel ee Lubnaan ee lagu dilay qaar ka mid ah 20,000 muwaadiniinta Lubnaan iyo Falastiin, badankoodna waa rayid.
Waxaa laga yaabaa in warqadda loo soo qaato si loo akhriyo in Israa’iil ay xasuuqday kumanaan dad ah oo kaliya maahan mid nolosha beddelaysa. Sidoo kale, sida loo malaynayo, waxay baraneysaa in USS Vincennes, oo ah hage gantaal la hago, uu soo riday diyaarad rayid Iiraaniyiin ah sanadkii 1988, taasoo soo afjartay 290 qof.
Mareykankuna wuxuu sii wadaa ilaa maanta inuu joojiyo nolosha Iiraan, ha ahaato weerar militari oo sharci darro ah – sidii dilkii Jeneraal Qassem Soleimani sanadkii hore – ama isagoo si wax ku ool ah ugu xukumay dil.
Waxaa hubaal ah in la soo saaro calaamadda “argagixisada” waxa loogu yeero “Iran-al-Qaacida dhidibka” ayaa ah ka jeedin waxtar leh xaqiiqda ah in Mareykanku uu ku qaatay duqeyntii ugu dambeysay ee taariikhda, googoynta, shucaaca, iyo haddii kale uu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda Afghanistan iyo Ciraaq. ilaa Syria iyo wixii ka dambeeya. Laakiin dadka ku jira dhamaadka cadaabku si fudud uma illaawaan dhibanayaashooda.
Weli waa in la arkaa in muujinta Pompeo ee dareenka xasaasiga ahi ay hordhac u tahay hawlgal milateri oo milatari oo Trump ah – toogasho kala tag ah, sida ay ahayd – ama si fudud loola jeedo in lagu qasbo hadalku jiho khaas ah oo laga yaabo inuu ku xidho gacmaha maamulka imanaya.
Dhamaadkii dhamaadka waxqabadkiisa, xoghayuhu wuxuu si toos ah ula yaabay in dhagarta argagaxiso ee lagu eedeeyay inay maleegayaan “Ista-al-Qaacida Axis” aysan ka koobnayn “foomka xiga ee madow ee lagu cadaadinayo wadamada inay dib ugulaabtaan heshiis nukliyeer”.
Oo maaddaama Mareykanku uu baqdin gelinayo heerar cusub oo cajiib ah, ma jiro waqti la mid ah xilligan oo kale si dib loogu xasuusto oraahdii hore ee ka timid Tennessee… ama Texas.
Aragtida lagu muujiyey qodobkaan waa mid u gaar ah qoraaga mana ahan mid ka tarjumeysa tifaftiraha Al Jazeera
Belen Fernandez waa qoraaga Masaafurinta: Diidmada Ameerika iyo Raadinta Adduunka (AMA Buugaag, 2019), Shuhadadu Waligood Ma Dhintaan: Ku Safrida Koonfurta Lubnaan (Warscapes, 2016), iyo The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Iyadu waa tifaftire wax ku biiriya joornaalka Jacobin, waxayna u qortay London Review of Books blog, Arrimaha Hadda, iyo Middle East Eye, iyo daabacaadyo kale oo badan.
Previous articleRa iisal wasare Rooble oo magacabay wasiir dar dar galiya Doorashada
Next articleDowlada Federaalka oo shaacisay Dilka Sargaal sare oo Alshabaab ka tirsan
Musiibo ka dhacya Indonesia maanta oo Jimca ah.
Maxkamada Ciidanka Qalabka sida oo amartay in la soo xira dadkii xasuuqay reer Guriceel
Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay kulankii Shalay ee wakiilka Qaramada Midoobay iyo Lafta garaan
Alshabaab oo caawa soo gashay dergaan u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo...
Faah Faahin: Rasaas ayaa laga maqlayaa Degaanka Ceel dheere oo dhaca inta u dhaxeysa Dhusomarreeb iyo Guriceel kadib markii Al-shabaab ah soo galleen caawa...
Beesha Caalamka oo Toos u soo faragalisay arimaha Doorashada